StarMaker Lite အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（81.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် StarMaker Lite: Singing & Music & Karaoke app
သူငယ်ချင်းများနှင့်တေးဂီတချစ်သူများပိုမိုလိုချင်ပါသလား။ သုံးစွဲသူ 50 ကျော်ကျော်ယုံကြည်မှုရှိသော်လည်း Starmaker သည်လူကြိုက်များသော Karaoke အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ Starmaker သည် Global Songbook ကိုအကြီးမားဆုံးသော Global Songbook ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Ed Sheeran, Shawn Mendes သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံတီးလုံးများကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ သီးသန့်ကင်မရာ Flitters နှင့် Voice Editor မှအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူသင်လုပ်နိုင်သည်။ feature အသစ် 'MIC PIC' သည်သင့်အားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဇာတ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြား starmaker အသုံးပြုသူများနှင့်အတူ MIC သို့ MIC သို့ MIC ကိုရယူရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ပွင့်လင်းသောအဆင့်တစ်ခုပေးသည်။ ၎င်းသည်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသီဆိုခြင်း၏ကြောက်မက်ဖွယ်ဘုရင်ကားမည်သူနည်းကိုကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်စည်းချက်မှုကိုနှစ်သက်ကြပါစို့။
starmaker lite Karaoke New Functions အသစ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောသီချင်းဆိုခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော:
Newsy Task အမျိုးအစားကို Excks add add add add add task-in check-in နှင့်အခြားဝှက်ထားသောကျောက်မျက်များပါ0င်သည်။ သွားရှာပါ။
MIC သို့ယူသွားပါ။ MIC အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း, အမြန်မှတ်ချက်ပေးပါ။
Singbook စာမျက်နှာကိုသင်၏အကြိုက်ဆုံးများကို အခြေခံ. ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာအုပ်ကိုရေးပါ။ Burmese Burmese Me Page ကိုစစ်ဆေးပါ။ Message အသစ် တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျအကွက်၏ box ကိုမှသင်၏သူငယ်ချင်းများဘာတွေလုပ်နေလဲ!
သူငယ်ချင်းများပိုမိုရရှိရန်သီချင်းဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောနှင့်လူမှုရေးလူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းကို0င်ရောက်ခြင်းကို ကြိုဆို. Singing app ၏လူမျိုးစုံကိုကြိုဆိုပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှသူငယ်ချင်းများကိုသီဆိုပါ။ အံ့သြဖွယ်ဆုများရရှိရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ပုံမှန်ကာရာအိုကေပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ0င်ပါသို့မဟုတ်ပါ0င်ပါ။
နေ့တိုင်း updated! ပါဝင်သည်:
7 နှစ် - Lukas ဂရေဟမ်
သင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပါ - Shawn Mendes
Hotline Bling - Drake Whot: Tayin Swake
မင်းကိုချစ်ပါ Ed Sheeran
အိမ်မှအလုပ်လုပ်ပါ - ပဉ္စမသဟဇာတ - The Major Lazer & DJ Khalifa
အလေးပေးပြောကြားခြင်း - လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူနေပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရှုံးနိမ့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရှုံးနိမ့်သည် - Meghan Traffor
Meghan Trapor - Luis Fonsi & Daddy Yankee (Feat ။ Justin Bieber)
ဘုရားသခင်သည်အမေရိကန် - Lee Greenwood ကိုကောင်းချီးပေး
ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်0န်ဆောင်မှုကို [email protected] တွင်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။
Sing Songs - Starmaker Karaoke တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်:
Facebook တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ (fb.me/starmaker) နှင့် Instagram (@Starmaker_App) နှင့် Instagram (@starmaker_App) နှင့် Instagram (@starmaker_app)
Starmaker Karaoke အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူသီချင်းများဆိုပါ။ သီချင်းဆိုရန်,
ဘာအသစ်လဲ StarMaker Lite: Singing & Music & Karaoke app 8.0.5
StarMaker Tips | How to sing better on StarMaker | Custom Settings
StarMaker Community - India
How to sing in Starmaker Android app?| Starmaker Android app review| Starmaker Android app highlight
How to Use StarMaker Lite Singing Karaoke App | How to Earn Money From StarMaker Lite Apps
Starmaker how to use,Learn how to sing at the starmaker,
STAR WORK & TECH
StarMaker Lite: Singing & Music & Karaoke app 8.0.4
StarMaker Lite: Singing & Music & Karaoke app 8.0.2
unicode သီချင်းများစုံလင်စွာမရှိပါ၍အဆင်သိပ်မပြေပါ zawgyi သီချင်းများ များနေသည် မျှမျှတတလေးလုပ်စေချင်သည် Thankyou ပါ
Ko min Maw